Gnome Fallback ee Ubuntu wuxuu la mid noqon doonaa (ama aad ugu eg yahay) Gnome 2 | Laga soo bilaabo Linux
Gnome Fallback ee Ubuntu waxay la mid noqon doontaa (ama aad ugu eg tahay) Gnome 2
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | La cusboonaysiiyay 28/09/2012 22:27 | Muuqaal / Shakhsiyeyn, GNU / Linux
En OMGUbuntu Waan qiimeyn karnaa mid ka mid ah shaqadiisa, sida lagu arki doono Ubuntu 12.04 fadhiga ee Gnome-dib u dhac, ama halkii, ka Gnome-ga caadiga ah.
Sidaad u aragto, waxay aad ugu egtahay wixii aan la soo joognay Gnome 2. 0_0
Marka lagu daro muuqaalka ku dhowaad isku midka ah, waxaad taageero ku yeelan doontaa saameynta leh Compiz sida aan ka arki karno gudaha maqaalka asalka ah. Maxay kula tahay Shaki la'aan kuwa Ubuntu.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Gnome Fallback ee Ubuntu waxay la mid noqon doontaa (ama aad ugu eg tahay) Gnome 2
Way degdegayaan .. Midnimadu ma jecla macaamiishooda! waa inay boodaan oo u boodaan si ay u soo jiitaan oo u qabtaan tirada badan ee ubuntu taageerto.
Dhab ahaan Iyada oo tan Ubuntu dib u heli karaa dhul lumay dartii Buoni, inkasta oo ay tahay in la arko hadday ugu dambayn ku guuleysato. Ugu yaraan waan ka helay talaabadan, waxay ahayd mid caqli badan.
Aniguba waan ku raacsanahay. Waa tallaabo wanaagsan oo loo qaaday ciyaarta ... ragga ugu dambayntii ugu dambayntii xoogaa way ka fikireen.
Hadda waa inaan eegno haddii ay ka dhigayso kuwa isticmaala inay joojiyaan isticmaalkooda Qoraxda ee loo yaqaan 'gnome classic' ee ubuntu bixineyso, Cinnnamon oo ah heerka horumarkiisu socdo, uma maleynayo inay istaagi doonto.
Miguel Angel G. dijo
Xusuusnow in dadka wata darawalka Ati lahaanshaha leh aysan heli doonin Gnome 3 ama Cinnamon. Marka Gnome-Fallback wuxuu noqon doonaa ikhtiyaar in la tixgeliyo.
Jawaab Miguel Ángel G.
Ii raali ahow elav, laakiin waxaan u maleynayaa in Ubuntu ay lumisay dhulkeeda iyada oo mudnaanteeda leh Mint dartiis, tan dambe waxay qabteen shaqadooda iyagoo diiradda saaraya aragti ka duwan iyo fikrad ka duwan tan ay adeegsatay Canonical.
Faalladaadu waa ansax
Kaliya intaas maahan, tufaaxyada iyo tilmaamayaasha ayaa shaqeynaya ...
Hadda, ma dhihi lahaa waad deg degtaa, haddii ay sidaas noqon lahayd, GNOME Classic ayaa lagu rakibayaa iska caadi mana aha kiiska; iyo halka GNOME Fallback uu gabow u yahay GNOME 3, xirmada gnome-panel (oo loo rakibay si loo helo qolofkan) waxay ku jirtay Ubuntu ilaa nooca 4.10.
Waxa kaliya ee Canonical uu sameeyay waxay ahayd inay u rarto Gtk + 3.
Si aad u rakibto, waa inaad kaliya rakibtaa xirmada gnome-panel waana inuu sameeyaa isticmaalaha, horay looma rakibin; markaa anigu ma arko "degdega".
Way la yaabi doonaan markay maqlaan aqbalaadda Midnimada, waa inaad diyaar u noqotaa inaad aragto wixii ka sarreeya sankooda oo aad meel dhigto xagjirnimada iyo, si cad, u fahanto oo si sax ah u adeegsato tirakoobka dhagxaanta
Maxaad isku dayeysaa inaad tiraahdo ... in degmadu leedahay xog been ah? : AMA
Dadku waxay u maleynayaan in DistroWatch ay leedahay runta dhabta ah, in haddii boggan uu leeyahay Puppy oo ah midka ugu caansan ee loo yaqaan 'distro' ... waxay isla markiiba aaminsan yihiin in taasi ay tahay tan ugu caansan, iyo markaad weydiiso iyaga kaliya waxay garanayaan sida loo yiraahdo «in distrowatch waa kii ugu horeeyay"ama wax la mid ah…
Waan fahansanahay waan fahmay .. hada halkan waxaan kaga hadlayaa asxaabta si daacadnimo leh, ma waxaad u maleyneysaa in lint mint loo adeegsanayo in ka badan Ubuntu?
Uma maleynayo in tirakoob ahaan aad taas cadeyn karto.
Xaqiiqdii ... Waxaan ka fikiri karaa wax hahahaha.
In Google ay na siiso xogta, waa bogga 1-aad ee adduunka booqashooyinka, halkaas ayaan ku ogaan karnaa wax intaas ka yar ama ka yar? 🙂
Xanuun daran dijo
Waa inay jirtaa (hadaanay ahayn) goob sida Statcounter oo kale ah, laakiin diirada saareysa Linux Distributions.
Kajawaabida Cudurka daran
Kuwa diida inay badalaan
Hours saacadaha wanaagsan, gacmo cagaaran.
Ma jiraa qof og haddii ay sidoo kale keenayso ama keeni doonto liiska adduunka? way fiicnaan laheyd oo xiiso laheyd in lahelo sida midnimada 😀
Ku jawaab Wild
Ka habsaan sidii hore weligeed, waxa ugu fiican oo dhan waa inay noqon doontaa wax "waddani ah" oo aan ahayn kordhin
Dabcan, haa, inkasta oo sheyga ay bixiyaan uu yahay midnimo hubaalna waxay xiiso dheeri ah gelin doonaan midnimada .. ama laga yaabee inay tahay wado dib loogu laabto sidii ay ahayd kahor ubuntu waa inaan ku dhex galo gnome panel classic yar yar ilaa nooca xiga dadku gabi ahaanba waa iska iloobaan midnimada ahahahahaha laga yaabee inaysan rabin inay tirtiraan midnimada xD taasi waa sababta ay u geliyaan gnome classic ahahaha (Waxyaabaha aan hindiso) 😛
Dhab ahaan Laakiin waxa iga xanaaqsan ayaa ah haddii aan doonayo inaan sidan oo kale Debian ugu isticmaalo, ma awoodo !! Sababtoo ah saxaaradu waxay umuuqataa mid foolxun sida waalan oo qeexiyayaashu uma shaqeeyaan sidii la rabay .. Waan ku necbahay Ubuntu !!!
Sababtoo ah waxay dib u magacaabeen xirmooyinka Debian, maadaama ay wax badan ka qaataan Debian ugu yaraan way ixtiraami karaan magaca maktabadooda ... laakiin si kastaba ha noqotee, taasi waa waxa ay tahay.
Maya, iyagu dib uma magacaabaan xirmooyinka debian; balastar gooni ah ayaa lagu daray; tani waxay ka dhigeysaa xirmooyin badan oo Ubuntu ah oo aan ka shaqeyneyn Debian.
Xitaa Linux Mint waxay u shaqeysaa mid la mid ah, inbadan oo ka mid ah xirmooyinkeeda kama shaqeeyaan Ubuntu (korkeeda) ama Debian.
Tan waxaan kugu raacsanahay, sida isticmaale Ubuntu waxay jebisaa kubbadayda in qaybinta kale aysan si fudud u isticmaali karin Midnimada ...
Marka laga soo tago isku dayga ka socda OpenSUSE iyo Fedora halkaasoo waxqabad aad u wanaagsan lagu gaaray laakiin ay go'aansadeen inaysan ku darin kaydka. Wadashaqeynta kooxda Ubuntu ee leh OpenSUSE iyo Fedora waa mid cajiib ah, laakiin waa inaysan jirin wadashaqeyn, wax walba waa inay noqdaan dheecaan badan.
Elav loo maareeyay (haddii aan si sax ah u xasuusto) in loo isticmaalo Midnimo ArchLinux
Wao .. oo sawiradaas kama qaadayo ?? aad u xiiso badan in la arko uniy oo ku dhexyaal xadka fedora
Midnimada Arch, maahan Fedora 😉
sii qoto dheer wali ahahahahaha ... wiil waxaad tahay ninjaskii amarka debian ahahahahahaha
Maxay daaqadaha u eg jelly-ku u soo noqon la’yihiin Gnome 3?
maxaa yeelay waa fikrad kale waxa wiilasha gnome fulinayaan.
Kaliya waxaan rakibay Ubuntu 12.04 laptop-kayga, laakiin nasiib daro waligeed waxay qaadataa in la raro Midnimo, markaa waxaan galay fadhigii Gnome Classic iyo boala, Ubuntu si dhakhso leh ayey u shaqeysaa 🙂
Maxaan u isticmaalaa Software Free?